Waa Maxay Amaahda Super Jumbo? Xaddiga iyo Xaddiga Amaahda - Wareegga Maalka
Bogga ugu weyn Waa Maxay Amaahda Super Jumbo? Xaddiga iyo Xadka Amaahda
Mid ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn ee dadka badankiisu la kulmaan marka ay timaaddo helitaanka guriga riyadooda waa maaliyad, gaar ahaan haddii ay tahay guri weyn.
Ama waxa ay haystaan ​​runtii ma awoodi karaan kharashaadka guriga ama dulsaarka ku lifaaqan deynta ay rabaan inay aad u sarreeyaan, sidaas darteedna ay ka quustaan.
Tani waa sababta dadka badankoodu u raadiyaan fursado sida amaahda Super Jumbo. Rugta guryaha ee Super Jumbo, waxaad ku heli kartaa guriga riyadaada. Tani waa sababta oo ah waxay dabooli kartaa sumad ka sarreysa celcelis ahaan iyo qiime sare marka loo eego deynta caadiga ah ma dabooli doonto.
Sida laga soo xigtay Wikipedia, Super Jumbo Mortgage waxaa loo yaqaanaa amaah guriyeed. Waxay bixisaa dabacsanaanta amaahda oo leh xaddidaadyo yar. Sidoo kale, waxaa loo isticmaali karaa in lagu maalgeliyo guryaha aasaasiga ah, guryaha labaad ama guryaha fasaxa, iyo guryaha maalgashiga.
Dhab ahaantii, amaahda Super Jumbo ayaa ah ikhtiyaar kuu fiican haddii aad u baahan tahay deyn ka weyn xadka maxalliga ah ee waafaqsan amaahda oo aadan haysan lacag caddaan ah si aad u dhigto lacag bixin hoose oo weyn.
Si aad u hesho faham cad oo ku saabsan amaahda, heerka, iyo xadka amaahda, akhri maqaalkan ilaa dhammaadka.
Dhanka kale, ka hor intaanan sii wadin, waxaad ku dhex mari kartaa jadwalka mawduuca hoose si dulmar guud looga sameeyo waxa laga filayo maqaalkan.
Waa Maxay Amaahda Super Jumbo?
Amaahda super jumbo waa deyn aad u badan oo ka badan xadka amaahda waafaqsan ee ay dejiyeen Fannie Mae iyo Freddie Mac, sidoo kale waxay leedahay xadka amaahda guryaha oo dhaafa kala soocidda amaahda "jumbo".
Fannie Mae iyo Freddie Mac waa ururo ay dawladdu maalgeliso oo siiya dammaanad suuqa guryaha iyagoo iibsanaya amaahda bangiyada iyo amaahiyaha gaarka loo leeyahay, dib u soo celiya deymaha, ka dibna dib ugu iibiya maalgashadayaasha kale.
Intaa waxaa sii dheer, Haddii amaahdu ka badan tahay xaddiga hadda jira oo lagu dejiyay $ 510,400, waxaa loo tixgeliyaa amaah aan waafaqsanayn, ama amaah jumbo ah.
Amaahda Jumbo waxay ka badan tahay xadka aan waafaqsanayn, laakiin deymaha jumbo ee super jumbo ayaa xitaa dhaafa xadka amaahda jumbo.
Sidee ayuu Amaahda Super Jumbo u shaqeeyaa?
Deymaha Super Jumbo waxay u shaqeeyaan si ka duwan deymaha caadiga ah. Deymahaani waxay leeyihiin shuruudo adag marka loo eego noocyada kale ee amaahda guryaha, waana inaad buuxisaa nooca hantida aad u gaarka ah, bixinta hoose, dhibcaha dhibcaha iyo shuruudaha saamiga deynta-ku-soo-gala si aad mid u hesho.
Si kastaba ha noqotee, Waxaa muhiim ah in la tixgeliyo shuruud kasta kahor intaadan helin amaah jumbo. Kahor intaanan sii wadin, aan bixinno sharraxaad kooban oo ku saabsan sida looga baahan yahay amaahda guryaha ee jumbo super.
Halkan, waxaad ka iibsan kartaa noocyo kala duwan guryaha oo leh deyn super jumbo. Ilaa iyo inta aad ka soo baxayso shuruudaha kale ee dayn -bixiyahaaga, ma jiraan wax xaddidaad dawladeed oo ku saabsan sida aad u isticmaali karto amaahdaada.
Waxaad u adeegsan kartaa inta badan amaahda super jumbo guryaha ugu horeeya, guryaha fasaxa, iyo guryaha maalgashiga.
Amaahda Super jumbo caadi ahaan waxay leeyihiin shuruudo lacag bixin oo aad u sarreeya marka la barbar dhigo deyn -dhaqameedka. Waa wax caadi ah in la arko amaah-bixiyeyaasha oo u baahan 20% hoos u dhigista Super Jumbo Mortgage ee hal qoys.
Sidoo kale, waxaa laga yaabaa inaad u baahato lacag-bixin sare oo sare ah guryaha labaad iyo qaybaha qoysaska badan leh.
Dhibcaha amaahda ayaa ah qodobka ugu weyn marka ay timaado helitaanka deyn jumbo oo weyn. Dhibcaha dhibcahaagu waa qiimeynta tirooyinka sida aad ugu kalsoon tahay amaah -bixiye ahaan. Dhibcuhu wuxuu ka koobnaan karaa 300 - 850 waxaana la qiimeeyaa dhowr arrimood si loo go'aamiyo dhibcaha dhibcahaaga.
Dib -u -Dhigista Saamiga Dakhliga (DTI)
Saamiga deyn-ku-soo-gala (DTI) wuxuu baaraa inta lacag ah ee aad heshid iyo inta deyn aad leedahay. Si aad u hesho saamigaaga DTI, u qaybi dhammaan lacagahaaga ugu yar ee lagaa rabo bil kasta xaddiga aad kasbato canshuurta ka hor.
Tusaale ahaan, haddii aad bil kasta ku bixiso $ 1,000 biilasha oo aad guriga keento $ 2,000 bishii canshuurta ka hor, saamigaaga DTI waa 50%: $ 1,000 oo loo qaybiyey $ 2,000.
Saamiga DTI ee hooseeya ayaa aad muhiim u ah markaad hesho deyn jumbo oo weyn maxaa yeelay waxay u sheegaysaa amaahiyeyaasha inaad yeelan doonto socod lacag caddaan ah oo kugu filan si aad u daboosho lacagaha deyntaada
Waa Maxay Shuruudaha Super Jumbo Malaabta guriga?
Hadda waad ogtahay in amaahda jumbo ee super jumbo ay tahay lacag aad u badan, waxay khatar weyn u yihiin amaah -bixiyeyaasha, marka waxay leeyihiin shuruudo adag si deyn -bixiyuhu ugu qalmo.
Sidaa darteed, halkan waxaa ku yaal qaar ka mid ah shuruudaha deynta super jumbo.
Waxaad u baahan doontaa inaad caddeyso in dakhligaaga iyo hantidaada billaha ah ay sii wadi karto bixinta amaahda guryaha
Waa inaad leedahay sumcad fiican
Sidoo kale, Ka digtoonow in qaar ka mid ah amaahiyeyaasha ay oggolaadaan oo keliya deymaha jumbo -ga haddii gurigu yahay meesha aad deggan tahay
Waxaad u baahan tahay inaad haysato ugu yaraan 10% -20% lacag bixin hore
Waxaa lagama maarmaan ah in la ogaado in dulsaarka dulsaarku uu aad u sarreeyo haddii qadarka la amaahday uu yahay mid aad u badan, sida ay tahay deymaha super jumbo.
Heerka Amaahda Super Jumbo
Amaahda Super jumbo caadi ahaan waxay qaadaan dulsaar ka sarreeya kan amaahda waafaqsan, sababtoo ah waxaa jira khatar weyn oo ku lug leh amaahda lacag aad u badan.
Laakiin, heerka amaahda ee Super Jumbo aad buu u kala duwanaan karaa, waxayna kuxirantahay amaahiyahaaga, dhaqaalahaaga, iyo bixinta hoose.
Marka deymaha guryaha loo arko inay ku lug leeyihiin halis yar, amaahiyayaashu waxay dooran karaan inay bixiyaan sicirrada ku jira khadka ama xitaa ka hooseeya kuwa u dhigma heerka amaahda.
Heerarka maanta, farqiga u dhexeeya amaahda waafaqsan iyo kuwa aan waafaqsanayn wuxuu u dhexeeyaa 0.25% ilaa 1%.
Waa maxay Xadka Loan Super Jumbo?
Fannie iyo Freddie waxay dejiyeen xadad ku saabsan inta deynkaagu noqon karo oo loogu yeero waafaqsanaanta xadka amaahda. Deynta guryaha ee ku hoos jirta xadka waxay leeyihiin caymis ilaaliya dayn -bixiyaha.
Halka “amaahda aan waafaqsanayn” mararka qaarkood loogu yeero amaahda Jumbo ama Super Jumbo maxaa yeelay waxay ka sarreeyaan xadkaan.
Si kastaba ha ahaatee, xadka amaahdu wuu ka sii adag yahay waxayna ku kala duwan yihiin gobolka iyo suuqa. Muddooyinkii ugu dambeeyay, xadka guri-qoys kaliya ayaa lagu dhigay $ 548,250.
Lacag deyn kasta oo ka sarreysa tan waxaa loo tixgeliyaa amaah jumbo mana taageeri doonto Fannie Mae ama Freddie Mac. Heerka xiga, oo ah deyn super jumbo, ayaa ah amaah ka badan $ 1 milyan.
Faa'iidooyinka Amaahda Super Jumbo
Waa kuwan faa'iidooyinka qaar ka mid ah amaahda super Jumbo
Amaahda Super Jumbo waxay bixisaa dabacsanaanta amaahda iyadoo leh xaddidaadyo yar.
Waxaa loo isticmaali karaa in lagu maalgeliyo guryaha aasaasiga ah, guryaha labaad ama guryaha fasaxa, iyo guryaha maalgashiga.
Markaad dib -u -xoojinayso deyn guri oo hadda jirta ama isku -darka amaahda badan ee hal deyn ah, deyn jumbo ah ayaa noqon karta ikhtiyaarka saxda ah.
Mortgage -ka Super Jumbo Miyaa kugu habboon?
Si aad u ogaato haddii amaahdaan kugu habboon tahay, waa inaad marka hore tixgelisaa haddii aad dhab ahaan mid tahay. Xusuusnow, xadka amaahda ee aan hore u sheegay, oo u dhexeeya $ 548,250 illaa $ 1 milyan meelaha qaar.
Marka, haddii hantida aad danaynayso ay dhaaftay xadka aaggaaga, waa inaad eegtaa haddii bixinta lacag -bixin hoose oo sare ay ka dhigayso farqiga.
Laakiin haddii aad weli u baahan tahay qadar deyn oo sarreeya, waa inaad marka xigta tixgelisaa maaliyaddaada. Deymahaasi waxay la yimaadaan lacago badan oo bille ah. Haddii aad dareento inaad awoodi kartid inaad ku bixiso lacagtan sare si raaxo leh, kaliya iska hubi inaad haysato dhibco dhibco sare iyo DTI hooseysa.
Amaahda Super Jumbo waxay noqon kartaa xalka aad u baahan tahay inaad ku bixiso gurigaas qumman.
Haddii aad u socoto guri qiimihiisu sarreeyo, oo aad ka fekereyso deyn jumbo oo weyn, Waa muhiim inaad tixgeliso shuruud kasta iyo u -qalmitaankaaga ikhtiyaarka maaliyadeed ee sida ugu fiican kuu shaqeynaya ka hor intaadan helin deynta.
15 Deyn -bixiyeyaasha Guryaha Ugu Fiican ee Iskood u Shaqaysta 2021
Sida Loo Kordhiyo Xadkaaga Dhibcaha Chase ee 2020 | La cusboonaysiiyay
Waa Maxay Waajibaadka Amaahda Damaanad -qaadka ah? Sida ay u Shaqeyso, Faa'iidooyinka iyo Qasaarooyinka
Sida Loo Maalgaliyo Saliida Lacag Yar
Amaahda Shakhsi ahaaneed ee la-shaqeeyayaasha waxay u noqon kartaa ikhtiyaar weyn kuwa dhibcahooda credit-ka aysan ku filneyn…